हेडवेयर र फेसन फ्याक्ट्री | चीन हेडवेयर र फेसन निर्माताहरू र आपूर्तिकर्ताहरू
कुनै मुद्रण ढाँचा वा डिजाइन वा यसमा तपाइँको कम्पनी लोगोको साथ कस्टम ब्यान्डाना तपाइँको व्यवसाय लाई बढावा दिई ठूलो काम गर्न सक्छ! यसैबीच, यसको अनुहारको मास्कको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ धुलो र प्रदूषित हावाबाट बच्न। यो धावकहरू, पैदल यात्रा गर्नेहरू, पैदल यात्रा गर्नेहरू, साइकल चालकहरू, र सबै प्रकारको फिटनेस उत्साहीहरूको लागि उत्तम आउटडोर पदोन्नति हो।
क्षेत्र मा ध्यान आकर्षित गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नै लागि ब्रान्ड र नाम प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईंको मनपर्ने छवि वा लोगो अपलोड गर्नुहोस् र हामीलाई अब तपाईंको डिजाईन विचारहरू बताउनुहोस्, हामी हातको स्लीभलाई तपाईंको चाहना अनुसार अनुकूलित गर्नेछौं! नरम लोचदार पॉलिएस्टरको साथ छापिएको पूर्ण रंग, हाम्रो बाहुको आस्तीन खेलकूद घटनाहरू, कर्मचारी उपहारहरू, र यस्तै अन्यका लागि उपयुक्त छन्।
कस्टम परिवार टेबल कपड़ा
परिवार र साथीहरूसँग खानाको आनन्द लिन टेबलको वरिपरि भेला गर्नु भन्दा धेरै रमाइलो छैन। हाम्रो अनुकूलन तालिका कपडा अझ राम्रो र न्यानो वातावरण बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं कुनै छवि, पाठ वा तपाईंलाई मनपर्ने डिजाईन प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बिभिन्न बान्की र एट्रोकसका स्टाइलहरूको साथ, यो टेबल कपडा बिभिन्न दृश्यका लागि राम्रो सजावट हो जस्तै औपचारिक खाना, जन्मदिन समारोह, र सबै प्रकारका थिम पार्टी।
कस्टम सोफा कभरहरू
के तपाई पुन: सजावटको लागि छिटो, सजिलो र आर्थिक तरिका चाहानुहुन्छ र तपाईको घर जीवित राख्न? यो विस्तार योग्य सोफा कभर तपाईंको सोफा को एक नयाँ ताजा लुक मात्र दिन सक्दैन, यसले तपाईंको सोफालाई दैनिक आँसु, स्पिल, दाग र अन्यबाट जोगाउन पनि सक्छ। यो बच्चा र घरपालुवा जनावरको साथ घरहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। र यो स्ट्रेचिई कपडा र लोचदार ब्यान्ड डिजाईनको कारणले कडा प्लाष्टिसिटीको हो, यसैले, यो प्रायः प्रकारका / सोफाका आकारहरूको लागि उपयुक्त छ र तपाइँको लागि कुरकुरा दृष्टिकोण सिर्जना गर्न सक्दछ।
कस्टम मुद्रित एप्रोन
एप्रनहरू तपाईंलाई सफा राख्न र माइक्रो जीवहरू रोक्नको लागि उत्कृष्ट हो। हाम्रो एप्रनहरू तपाइँको आफ्नै डिजाइनहरू, पाठ वा लोगोसँग अनुकूलित मुद्रित गर्न सकिन्छ, यसैले, तपाइँ सफा राख्नको लागि यो एक राम्रो उपकरण मात्र होईन जब तपाइँ पकाउँदै हुनुहुन्छ वा बगैंचामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसले तपाइँको व्यवसायलाई प्रमोट गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।
हाम्रो हेडवेयर नरम लोचदार पॉलिएस्टरले बनेको छ। यो अनुहार मास्क, bandana, रिस्टब्यान्ड, हुड, कपाल टाई को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। छविहरू वा लोगो सहित आदि तपाईं यसमा मुद्रित गर्न। यो एक फेशन गौण हुन सक्छ र साथै तपाईंको ब्रान्डलाई मान्यता दिनको लागि एक आँखा लिने उपकरण।
कस्टम मुद्रित स्कार्फ तपाईको डिजाइन लगाउने विचित्र र स्टाइलिश तरीका हो। एक निजीकृत स्कार्फ पनि तपाइँको आफ्नै ब्रान्ड वा डिजाइनर लेबल सुरूवात गर्न एक शानदार तरीका हो। आउँनुहोस् र तपाईंको छापिएको स्कार्भको साथ तपाईंको स्टाइल आफ्नै हातमा लिनको लागि तपाईंको आफ्नै बान्की, डिजाइन वा फोटोहरू छनौट गर्नुहोस्।